कफी शपसहितको स्मार्ट शौचालय बनाउँदै काठमाडौँ महानगर | नेपाली पब्लिक कफी शपसहितको स्मार्ट शौचालय बनाउँदै काठमाडौँ महानगर | नेपाली पब्लिक
डाँका घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा ६… श्रीमान जोनसँग हट अवतारमा प्रियंका चोपडा अभिनेत्रीले जन्माइन् पानिभित्र शिशु देशको लागि खेल्न बीबीएल छोडेर नेपाल… ‘वी विल मिस यु सन्दीप!’ ‘सेन्टी भाइरस’ फिल्मको ५० प्रतिशत नाफा… हुम्लाले भोगेको नियती र राज्यको अकर्मण्यता
होमपेज / अर्थ | कर्पोरेट | समाज |
कफी शपसहितको स्मार्ट शौचालय बनाउँदै काठमाडौँ महानगर
नेपाली पब्लिक २०७६, ९ श्रावण बिहीबार ११:३९
काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाको एउटै योजना छ, काठमाडौँ शहरलाई स्मार्ट बनाउने। महानगरपालिकाले विगत केही वर्षदेखि नै ‘स्मार्ट सिटी’ को परिकल्पना गर्दै विभिन्न स्मार्ट कामहरू अघि सारेको छ। स्मार्ट सिटी बनाउने परिकल्पनाको एउटा रूप हो ब्रुमर । उपत्यकालाई धूलोमुक्त बनाउन महानगरले अहिले सातवटा ब्रुमर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ भने आवश्यकताअनुसार अझै पनि ब्रुमर थप गर्ने महानगरको योजना छ। त्यस्तै, न्यूरोडजस्तो ब्यस्त क्षेत्रमा पार्किङको समस्या समाधान गर्न स्मार्ट पार्किङको व्यवस्था पनि महानगरले गरिसकेको छ।
महानगरले उपत्यकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने र पर्यटन वर्ष २०२० लाई सफल पार्न विभिन्न योजनाहरू अघि सारेको छ। महानगरले अहिले स्मार्ट शौचालयको काम अघि सारेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र शौचालय पर्याप्त छैनन्, भएका पनि व्यवस्थित छैनन्। कतै घुम्न जाँदा, बाहिर निस्किँदा उचित शौचालयको व्यवस्था नहुँदा सर्वसाधारणहरूले धेरै कठिनाइ भोग्नुपरिरहेको छ । शौचालय भएको ठाउँमा पनि त्यसको वरिपरि गन्धले बस्नै नसक्ने अवस्था छ। यही समस्यालाई समाधान गर्न महानगरपालिकाले स्मार्ट शौचालयको परिकल्पना गर्दै योजना अघि बढाएको हो ।
हाल महानगरभित्र ५७ वटा शौचालय रहेको र त्यतिले मात्र पर्याप्त नरहेको महानगरको भनाइ छ। ती शौचालयहरू पनि व्यवस्थित नरहेकाले अब त्यसलाई पुनः व्यवस्थित गर्न महानगर लागिपरेको छ। अब ती शौचालयहरूलाई नयाँ प्रविधिका साथ पुनर्निर्माण गर्ने तयारी महानगरको छ।
त्यति मात्रै होइन, महानगरले आवश्यक अन्य स्थानमा पनि थप ६९ वटा स्मार्ट शौचालय निर्माण गर्ने महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले जानकारी दिए। उनले भने, ‘पुरानोलाई भत्काएर नयाँ निर्माण गर्ने होइन तर त्यसलाई नै आवश्यक पर्ने सबै सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने हो। अहिले हामीले पुरानोलाई मर्मत गर्ने र नयाँ प्रविधियुक्त स्मार्ट शौचालयको भवन निर्माणमा नै जोड दिँदै आएका छौँ। कस्तो निर्माण गर्ने, कुन डिजाइनमा बनाउने सबै तयार भइसकेको छ। तर कार्यान्वयनमा जान मात्र बाँकी हो।’ यस्तै उनले पर्यटन वर्ष २०२० लाई लक्षित गर्दै यो योजनालाई अघि सारेको पनि बताए।
कहाँ–कहाँ बन्छन् स्मार्ट शौचालय ?
महानगरभित्र हाल ५८ वटा सार्वजनिक शौचालय छन्। कामपाले यसबाहेक पनि अनुगमन गरी विभिन्न ६९ स्थानमा प्रवधियुक्त स्मार्ट शौचालय निर्माण गर्न लागेको हो। एकैचोटि निर्माण नभए पनि विस्तारै निर्माण हुने प्रवक्ता डंगोलको दाबी छ। उनका अनुसार पहिलो चरणमा १० देखि १२ वटासम्म निर्माण गरिनेछ।
त्यस्तै, हाल निर्माणका लागि सिफारिश गरिएका स्थानहरूमा टेकु चोक, सानेपा पुल, कालिमाटी, कलंकी, सीतापाइला, बालाजु, माछापोखरी, गंगबु प्रहरी चौकी, महाराजगञ्ज, सुकेधारा, चाबहिल, मित्रपार्क, जगबागेश्वरी, गौशाला, तीनकुने, कोटेश्वर, नयाँ बानेश्वर, बबरमहल, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, सुन्धारा, एनएसी, न्यूरोड जुद्ध शालिक आसपास, हनुमानढोका, जमल, लैनचौर, सोह्रखुट्टे, बल्खु र कुलेश्वर रहेका छन्। बाँकी ठाउँमा भने अध्ययन गर्दै निर्माण गरिने बताए।
के हो स्मार्ट शौचालय ?
स्मार्ट शौचालय एक प्रविधियुक्त र सुविधायुक्त शौचालय हो। महानगरले नयाँ निर्माण गर्न लागेको शौचालयमा छुट्टाछुट्टै बालमैत्री, महिलामैत्री र अपाङ्गता मैत्री हुनेछ। पर्याप्त जग्गा भएको ठाउँ हेरेर महिला, पुरुष र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि समेत छुट्टाछुट्टै डिजाइनमा शौचालय निर्माण गरिने प्रवक्ता डंगोलले जानकारी दिए। पहिले अपाङ्गता, बालमैत्रीहरूलाई धेरै गाह्रो हुने गर्थ्याे भने अब त्यो समस्या हट्ने उनको विश्वास छ।
त्यति मात्र होइन, महानगरले निर्माण गरिएको शौचालयमा पर्याप्त पानी, स्यानिटरी प्याड, बत्ती, सुविधाजनक शौच गर्ने ठाउँ हुनेछ। महानगरले तय गरेको डिजाइनअनुसार यी शौचालयमा अटोमेटिक बत्ती जडान गरिनेछ, जुन मान्छे छिर्दा बल्ने र निस्किँदा आफैँ निभ्ने हुनेछ। उनका अनुसार सफाइका निम्ति पानी, ट्वाइलेट पेपर, हात धुन साबुनको व्यवस्थासमेत हुनेछ।
कफी शपसहितको शौचालय
सबैलाई लाग्छ शौचालयको वरिपरि गन्धले बस्न नसक्ने ठाउँमा कफी शप खोल्ने कुरा। सबै मानिसहरूले शौचालय भन्नेबित्तिकै फोहोर ठाउँ हो भन्ने अवधारणा बोकेका हुन्छन्। तर, महानगरले यो अवधारणालाई गलत सावित गर्न शौचालयवरिपरि सानो पार्क र व्यवस्थित कफी शप बनाउन लागेको हो। प्रवक्ता डंगोलले भने, ‘शौचालय प्रयोग गर्न आउँदा फुर्सदमा चिया, कफी खाना सुविधा मिल्नेछ।’ शौचालय निर्माण गर्ने ठाउँवरिपरिको वातावरण पनि सफासुग्घर र व्यवस्थित गर्ने योजना महानगरको रहेको छ।
महानगरको अटो स्मार्ट शौचालय योजना
महानगरले स्मार्ट शौचालयसँगै अटो स्मार्ट शौचालय पनि निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । प्रवक्ता डंगोलका अनुसार हेर्दा सुन्दर, प्रयोग गर्न पनि सजिलो हुने तथा जुनसुकै स्थानमा राख्न सकिने ‘रोटोमोल्डिङ’ प्रविधिका यी स्मार्ट शौचालयहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका हुनेछन्। स्मार्ट अटो शौचालय धेरै मजबुत हुनेछ।
यसमा १ सय ६० लिटर क्षमताको पानी ट्याङ्की र २ सय ९० लिटर फोहोर बोक्ने क्षमताको ट्याङ्की पनि रहनेछ। भित्र हात धुने साबुन, ट्वाइलेट पेपर, स्ट्याण्ड, ऐना आदिका साथै अटो फ्लसको सुविधा हुनेछ। यस्ता शौचालयहरू जेष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाका लागि पनि सहज हुनेछन्।
डंगोलले भने, ‘पर्यटन क्षेत्रहरूलगायत विरासत स्थलहरूमा अटो शौचालयको प्रयोग गर्न सकिन्छ। किनभने यो अटो शौचालय भनेको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकिने गरी निर्माण गरिएको हुन्छ।
यीबाहेक पनि नेपालमा सञ्चालनमा रहेका प्रत्येक पेट्रोलपम्पमा एउटा शौचालय हुनुपर्ने प्रवक्ता डंगोलको भनाइ छ। तर, उपत्यकाका सबै पेट्रोलपम्पमा शौचालयको व्यवस्था छैन। अब उपत्यकाका ७२ ठाउँमा रहेका पेट्रोलपम्पमा पेट्रोलपम्पसँगको साझेदारीमा महानगरले सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न छलफल गरिरहेको डंगोलले जानकारी दिए।
विप्लव नेकपाका रौतहट जिल्ला सेक्रेटरी…
संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन
यस्ता छन् भोक नलाग्नुका कारणहरु
ट्याक्टरले किचेर एकको मृत्यु
चलचित्र ‘दुई नम्बरी’मा दयाहाङ, पल…
‘सेन्टी भाइरस’ फिल्मको ५० प्रतिशत…
महानगरको सहयोगमा छाउनीमा हेमोडाइलासिस सेवा…
सडकमा मागेर नबस्न कामपाको अनुरोध
कामपाले शुरु गर्यो प्रचार सामग्री…
काठमाडौंका होर्डिङ बोर्ड हटाउने अभियान…
साना सहकारीलाई एकीकरण गर्दै काठमाडौ…
न्युजिल्याण्डविरुद्ध भारतको शानदार जित
२०७६, १२ माघ आईतवार १५:५९